सिंहहरु बाटोमै निर्धक्क सुतेपछि…. – Sabaikoaawaj.com
सिंहहरु बाटोमै निर्धक्क सुतेपछि….
शुक्रबार, बैशाख ५, २०७७ 7:48:01 AM	मा प्रकाशित
कोरोना भाइरसको विश्वव्यापी महामारीले मानवीय गतिविधि प्रायः अधिकांश क्षेत्रमा घरभित्र सीमित भएका छन् । मानिसहरु घरमै बस्न बाध्य छन् संक्रमणबाट जोगिनका लागि । अत्यावश्यक बाहेकका सेवाहरु खुलेका छैनन्, सार्वजनिक स्थानमा मानिसको चहलपहल लगभ शून्य जस्तै छ विश्वका अधिकांश क्षेत्रमा । यसले अर्थतन्त्रमा असर गरेको छ र यो प्रभाव लामो समय रहने जनाइएको छ ।
तर संक्रमण रोक्न वा फैलिन नदिनका लागि पनि लकडाउनसहितका उपाय अति प्रभावकारी देखिएका छन् । कोरोना भाइरसको महामारीका कारण लागु भएको लकडाउनले खुशी हुने समुदाय पनि छन् । त्यो समुदाय हो वातावरण र जंगली जनावर । मानिस घरमा सीमित भएपछि जनावरहरु स्वच्छन्द भएका छन् । वातावरण स्वच्छ भएको छ । जंगली जनावरले मानिसको गतिविधि कम भएको थाहा पाउँछन् र आफूलाई निर्धक्क बनाउने गर्छन् ।
यस्तै गरेका छन् दक्षिण अफ्रिकाका सिंहहरुले । मानिसहरु लकडाउनका कारण बाहिर ननिस्किएको थाहा पाएका दक्षिण अफ्रिकाको क्रुगर राष्ट्रिय निकुञ्जका सिंहहरु बाटोमै आएर आराम गर्न थालेका छन् । कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलिन नदिनका लागि लागु भएको लकडाउन अन्तरगत क्रुगर राष्ट्रिय निकुञ्ज मार्च २५ सम्मका लागि बन्द गरिएको छ । लकडाउनसँगै मानिसहरुको गतिविधि कम भएपछि सिंहहरु मुल सडकमै आएर आराम गर्न थालेका हुन् ।
सामान्य अवस्थामा सिंह या बाघहरु बाटोमा देख्ने भनेको रेन्जरहरुले रातिको समयमा मात्रै हो । तर रेन्जर रिचर्ड सावरी बुधबार गस्तीका लागि राष्ट्रिय निकुञ्जमा गएका थिए । उनले सामान्य अवस्थामा पर्यटकले भरिभराउ हुने सडकमा सिंहहरु शानका साथ सुतिरहेको देखेका हुन् । रेन्जर रिचर्डले उनीहरुको तस्बिर लिए । चोरी शिकार नियन्त्रणका लागि निगरानीमा निस्किएका रेन्जर रिचर्डले खिचेको तस्बिरमा मानवीय गतिविधि कम हुँदा सिंहले पाएको आराम देखिएको छ ।
उनले मोबाइलबाट तस्बिर लिएका हुन् । उनले मात्रै पाँच मिटरको दूरीमारहेर तस्बिर खिच्दा पनि सिंहले कुनै वास्ता नै गरेनन् । उनले ती तस्बिरहरु सबैले देखुन् भनेर सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गरेका छन् । हालसम्म दक्षिण अफ्रिकामा कोरोना भाइरसका कारण ४८ जनाको मृत्यु भएको छ भने संक्रमितको संख्या २६ सय पाँच रहेको छ ।
प्रकाशित मितिः शुक्रबार, बैशाख ५, २०७७ 7:48:01 AM